समयमा उपचार गरे क्यान्सर पूर्णरूपमा निको हुन्छ
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता स्वास्थ्यसमयमा उपचार गरे क्यान्सर पूर्णरूपमा निको हुन्छ
क्युरा हेल्थको एपबाट एपोइन्टमेन्ट बुक गरेर क्यान्सरसम्बन्धी एक महिना निःशुल्क परामर्श लिन सकिने
विराटनगर / आज विश्व क्यान्सर दिवस । हरेक वर्ष ४ फेब्रुअरीका दिन क्यान्सर दिवस मनाइने गरिन्छ ।
यो वर्ष ‘म सक्छु र म गर्नेछु’ (आइ एम एन्ड आइ विल) भन्ने नारासहित क्यान्सर दिवस मनाइँदै छ । यसै क्रममा क्युरा हेल्थ मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट एपोइन्टमेन्ट बुक गरेमा क्यान्सरसम्बन्धी एक महिना निःशुल्क परामर्श लिन सक्ने सुविधा सुरु भएको छ ।
समाजमा क्यान्सरको जनचेतना फैलाउनका लागि क्युरा हेल्थको एपबाट विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका उप–प्राध्यापक तथा अन्कोलोजिस्ट (क्यान्सर रोग विशेषज्ञ) सुलभ सापकोटासँग एक महिना निःशुल्क परामर्श लिन सकिनेछ । क्युरा हेल्थको एपमार्फत् डा. सापकोटासँग अस्पताल गएरै वा घर बसेरै समेत अडियो तथा भिडियो कलमार्फत् परामर्श लिन सकिन्छ ।
हामीमध्ये धेरैले क्यान्सरका कारण आफन्त तथा साथीभाइ गुमाइरहेका छौँ । क्यान्सर नसर्ने जोखिमयुक्त रोग मानिन्छ । नेपालमा क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममै छ । क्यान्सर विभिन्न कारणले लाग्ने हुन्छ । जुनसुकै कारणले क्यान्सर लागे पनि सुरुमा यसको पहिचान गरेर समयमै उपचार गर्न सके यसलाई निको पार्न सकिन्छ । तर, जनचेतनाको अभावले गर्दा मानिसहरू क्यान्सर लागेरभन्दा पनि समयमा उपचार नगराएका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सर भनेको के हो, यसका लक्षण र उपचार विधिसँग सम्बन्धित रहेर डा. सापकोटासँगै गरेको छोटो कुराकानी :
शरीरमा हजारौँको सङ्ख्यामा कोशिका हुन्छन् । शरीरको विकासको क्रममा कोषिकाहरू अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जान्छन् । कोषिकाहरू बढेर शरीरका अन्य भागमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै फैलिने क्रमलाई क्यान्सर भनिन्छ ।
क्यान्सर कति प्रकारका हुन्छन् ? शरीरका कुन–कुन भागमा क्यान्सर लाग्न सक्छ ?
क्यान्सर रोग हुने जोखिम समूहमा को–को पर्छन् ?
क्यान्सर जोसुकै तथा सानो बच्चादेखि लिएर वृद्धवृद्धा अर्थात् जुनसुकै उमेरका मानिसलाई हुनसक्छ । तर, कुनै क्यान्सर उमेरका कारण पनि हुनसक्छ । बच्चाहरूमा प्रायः रगतसम्बन्धी क्यान्सर हुनसक्छ । उमेर बढ्दै गएसँगै कलेजो, आन्द्रा र बोसेआन्द्रा सम्बन्धित क्यान्सर हुने जोखिम धेरै हुनसक्छ । त्यस्तै, प्रायः महिलामा महिनावारी रोकिने समयमा वा रोकिइसकेपछि पाठेघरसम्बन्धी क्यान्सर हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
क्यान्सर हुने मुख्य कारण के हो ?
प्रायः शरीरमा हुने कोशिकाको क्रोमोजोम (जसले वंश पहिचान गराउँछ)मा समस्या आएको कारण क्यान्सर हुनेगर्छ । क्यान्सरको मुख्य कारण पत्ता लगाउन निकै गाह्रो हुनसक्छ । क्यान्सर विभिन्न कारणले हुनेगर्छ । कसैलाई सङ्क्रमणको कारण, रेडिएसनको कारण, लामो समय कुनै औषधीको सेवन, लागुपदार्थको सेवन, लामो समयसम्म किटाणुनाशकको सम्पर्कमा रहेका (विशेषगरी किसान) वा जीवनशैलीको कारण पनि क्यान्सर हुनसक्छ ।
अत्यधिक चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, रक्सीको सेवनका कारण पनि क्यान्सर हुने जोखिम रहन्छ । यस्ता पदार्थमा तीन सयभन्दा बढी क्यान्सर गराउन सक्ने पदार्थ समावेश हुन्छन् । जसले गर्दा ओठ, मुखदेखि लिएर फोक्सोसम्मको क्यान्सर गराउन सक्छन् । क्यान्सर वंशाणुगत कारण पनि हुनसक्छ । परिवारको कुनै एक सदस्यमा क्यान्सर भएको छ भने अन्यलाई पनि हुनसक्ने सम्भावना भने रहन सक्छ ।
कस्ता लक्षण देखिएमा क्यान्सर भएको शङ्का गर्न सकिन्छ ?
शरीरमा कुनै ठाउँमा मासुको डल्ला विकास हुन थालेमा, रगतसम्बन्धी कुनै रोग देखापरेमा, लामो समयदेखि दुब्लाउँदै गएमा, खाना नरुच्ने, खाना खाइरहे पनि दुब्लाउँदै गएमा, लामो समय (एक वा दुई महिनाभन्दा धेरै) ज्वरो आइरहेमा, महिलाहरूमा स्तनमा केही गाँठो वा असहज मसहुस भएमा, महिनावारीमा गडबडी हुने, अत्यधिक रक्तश्राव हुनेजस्ता लक्षण देखिएमा सामान्यतः क्यान्सर भएको पो हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ । यस्ता लक्षण देखिएमा मानिसले एकपटक क्यान्सर भएको नभएको पत्ता लगाउनका लागि अनिवार्य जाँच गराउन आउनुपर्ने हुन्छ ।
क्यान्सर भएमा गरिने जाँच र यसको उपचार विधि के–के हुन् ?
प्रायः अस्पताल आएका बिरामीलाई सामान्य सोधपुछ गरेर रोग पत्ता लगाउन कोशिस गरिन्छ । त्यसपछि क्यान्सर हो वा हुनसक्ने शङ्का लागेमा कुन प्रकारको क्यान्सर हो, त्यसअनुसार जाँच गरिन्छ । मासुको क्यान्सर भएमा मासुको डल्लाको जाँच गर्ने (बायोप्सी), रगतसम्बन्धी भएका क्यान्सरमा रगत तथा बोनम्यारो जाँच गरिन्छ ।
क्यान्सर अगाडिकै चरणमा पत्ता लगाउन सकिए पूर्णरूपमा क्यान्सरलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ । र, एड्भान्स्ड चरणमा क्यान्सर पत्ता लागेमा पुरै निको नभए पनि यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यी जाँच गरिसकेर क्यान्सर पत्ता लागेमा क्यान्सरलाई शल्यक्रियामार्फत हटाइन्छ । र, यदि अपरेसन गरेर पनि क्यान्सरको केही भाग बाँकी भएको खण्डमा रेडिएसन गरिन्छ तथा क्यान्सर शरीरको अन्य भागमा फैलिसकेको भए वा सानो भएका कारण नदेखिने भएमा केमोथेरापी विधिबाट क्यान्सरका बिरामीको उपचार गरिन्छ ।
यसबाहेक क्यान्सरको उपचार गर्न सकिने नयाँ पद्धति पनि विकास भइरहेका छन् । क्यान्सरलाई इम्युनोथेरापी, बायोलोजिक थेरापी तथा हर्मोनल थेरापीबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।
विराट शिक्षण अस्पतालमा क्यान्सरको कुन–कुन उपचार सम्भव छन् ?
विराट शिक्षण अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार सुरु गरेको ढेड वर्ष जति भएको छ । अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराउन आउने तथा केमोथेरापी लिन आउने बिरामी धेरै छन् । उपचारपछि धेरैजसो बिरामी निको भएर समेत फर्किसक्नुभएको छ । अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार रेडिएसन थेरापीबाहेकका शल्यक्रिया विधि, केमोथेरापी इम्युनोथेरापी, बायोलोजिक थेरापी तथा हर्मोनल थेरापी उपलब्ध छन् । र, एक वर्षभित्रमा रेडिएसन थेरापी पनि अस्पतालमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
क्यान्सरबाट निको भएमा बिरामीको आयु कतिसम्म हुन्छ ?
क्यान्सर लागेर समयमा उपचार गरी पूर्णरूपमा निको भएमा बिरामीको आयु सामान्य मानिसजस्तो र मानिस स्वस्थ पनि हुनसक्छ । तर, एड्भान्ड स्टेजमा पुगेको क्यान्सरको बिरामीको आयु पाँच वर्षभन्दा कम वा बढी पनि हुनसक्छ ।
एकपटक निको भएपछि पुनः क्यान्सर लाग्न सक्छ ?
शरीरको भागमा लागेको क्यान्सर छ भने निको भएपछि पनि रगतसम्बन्धी क्यान्सर हुने सम्भावना तीन प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुन्छ । अध्ययनको आधारमा हेर्नुपर्दा रगतबाहेकका शरीरमा अन्य भागमा लागेको क्यान्सर भएको छ र उपचार गरेर निको भएका छन् भने १० देखि २० वर्षको अन्तरालमा उनीहरूलाई रगतसम्बन्धी क्यान्सर हुने सम्भावना देखिएको छ ।
एकपटक निको भएपछि शरीरकै अर्को भागमा पुनः क्यान्सर हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर, यदि कुनै वंशाणुगत कारणले भने एकै मानिसमा शरीरको विभिन्न भागमा दुई वा सोभन्दा बढी पनि क्यान्सर भएको हुनसक्छ । जुन एकैपटकमा वा समय अन्तरालमा देखिँदै पनि जानसक्छ । साथै, रगतसम्बन्धी क्यान्सर हुनेहरूमा अन्य क्यान्सर हुने सम्भावना रहे पनि निकै कम मात्रामा मात्र भएको पाइएको छ ।
क्यान्सरसम्बन्धी मानिसमा जनचेतना कस्तो छ ? जनचेतना बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
अस्पताल आएका क्यान्सरका बिरामी तथा आफन्तमा केही क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतना राम्रो छ भन्ने अवश्य महसुस हुन्छ । क्यान्सरको मुख्य पार्ट भनेको उपचारको पार्ट हो । उपचारको समयमा केही समस्या भने अवश्य आउन सक्छ । कोही बाहिरबाट आएको बिरामी हुनसक्छन्, कसैको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनसक्छ, कसैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, कसैलाई क्यान्सर भएको थाहा नभएर अन्य उपचार गरिरहेको पनि हुनसक्छ ।
जनचेतना बढाउनका लागि गाउँ सहर, अस्पताल, कम्युनिटी लेभल तथा विभिन्न ठाउँमा प्रचार–प्रसार गर्ने, क्लबहरूको सहयतामा क्याम्पेन चलाउने, क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने गर्नुपर्छ । सबै प्रकारको क्यान्सरका बारेमा जनचेतना फैलाउन गाह्रो हुनसक्छ तर पाठेघर, फोक्सोसम्बन्धी प्रमुख क्यान्सर वा जसको कारण धेरै मानिसको ज्यान गइरहेका छन् वा जानसक्ने सम्भावना धेरै छ ती क्यान्सरको बारेमा फोकस गरेर मानिसमा जनचेतना बढाउन जरुरी छ ।